Ndiyakwazi ukwenza umyalelo wam ikhadi?
Ngenxa yemithetho yelungelo lokushicilela, okwangoku asiyamkeli imibuzo yoyilo lwesiko kwaye sinika kuphela iitemplate zethu ezenziwe kwangaphambili. Unokwenza onke amakhadi kwimfuno yakho: ukulayishwa kweefoto, ukutyikitywa, iinxalenye zombhalo kunye nemihla.
Ndingatshintsha ididi yam emva koko?
Unokuhlala ucela ukuguqulwa kwangexesha elide lingashicilelwa kwaye lithunyelwe. Emva kokuba i-ID yakho ikhutshwe awukwazi ukwenza nayiphi na inguqu kuloo myalelo.
Ndiyakusula njani umyalelo wam?
Ngokwemigaqo ungenise iodolo ephindwe kabini okanye ungathanda ukurhoxisa iodolo, siyakucela ukuba usithumelele i-imeyile nenombolo yeodolo ehambelanayo. Siza kuphendula kwaye siqinisekise ukurhoxiswa kwakube kufanelekile (nje ukuba i-odolo yakho ingaqhubekeki).
Kwenzeka ntoni emva kokuba ndihambise umyalelo?
Idata yakho (ithemplate yamakhadi, ifoto, iinkcukacha zekhadi, idatha yokuhambisa, njl.) Izakugcinwa ngokuzenzekelayo kwaye zikhuseleke kwiziko lethu ukuze ziqhutywe. Siza kuthumela umyalelo emva kokufumana intlawulo.
Usebenza njani umenzi wekhadi le-ID?
1. Khetha i-template / yokwakheka kwekhadi eyenziwe ngaphambili.
2. Yenza ikhadi lakho ngokuzigcwalisa ifom: igama, imihla, ukulayishwa kwesithombe, njl.
3. Yongeza into kwinqwelo yakho yokuthenga.
4. Hlola umyalelo kwaye uqalise intlawulo.
5. Ikhadi lakho liya kufika ngaphakathi: iJamani (iintsuku zeentsuku zeentsuku ze-1-2), i-EU (ii-3-7 zeentsuku zoshishino), ngamazwe ngamazwe (ii-7-14 zeentsuku zoshishino).
Ndingayibona njani invoyisi?
Ukukhuphela i-invoyisi yakho ngicela ungene ngemvume kwi-akhawunti yakho kwaye uvule inombolo ehambayo ye-oda.
Ungayikhulula njani ikhowudi yokuphuhlisa?
Kukho iindlela ezimbini zokufumana isaphulelo www.make.id, oko ikukuthi
1) ngokwabelana kunye nokuthanda / ukulandela thina kwiMithombo yeendaba yeNtlalo (Facebook & Co)
Kunye - kunye
2) ngokufumana ikhowudi ye-discount code engahlawulelwa ngexesha lomyalelo.
Ukuba ufumene ikhowudi yokuphuhlisa (i-newsletter, njl njl.), Ngoko nceda ungenise okanye ukopishe / unamathisele ikhowudi yakho kwisebe elisaphulelo. Iza kubona ngokuzenzekelayo, isebenze kwaye ibalwe isaphulelo / isixa-mali.
Ukuhlawula kunye nentlawulo
Izinketho ezahlukeneyo zokuhlawula ziyafumaneka!
Iyiphi imali eya kuhlawulwa?
Akukho kubuyiselwa okunokwenzeka emva komveliso.
Kutheni ndifumana isikhumbuzo sokuhlawula?
Ngenxa yokuba unomyalelo osalindelekileyo, ulinde ukuhlawulwa kwaye uthunyelwe kuwe. Iyalwa ngengozi ngamanye amaxesha? Nceda ukhansele.
Ilungelo lobulungisa kunye nezoMthetho
Ziphi iOfisi Zakho Ezifumanekayo?
Iprojekthi yethu yesazisi iqale ngo-2007 eHamburg, eJamani phantsi kwe-URL eyahlukileyo enabasebenzisi abambalwa. Ukusukela ngoko ikhule yaba yeyona ndawo inkulu yokushicilela ikhadi le-PVC kwivenkile ekwi-intanethi engaphezulu kwe-1,500 yokuphononongwa kwabathengi.
Umnikezeli omkhulu, ukuhanjiswa okukhawulezayo kunye nomgangatho omhle! Ngaba unokubongoza bonke abantu!
Siyazingca ngokukunika isisombululo esilula: Amakhadi e-ID anokuprintwa okungenamda, zombini iiholograms ezisemacaleni kunye ne-QR / iiBhakhowudi ezinokufundeka kubandakanya khulula ukuthunyelwa kwehlabathi ngeposi.
I-MAKEID i-generator card ekhadini ye-ID kwaye igcine ngeendlela eziphambili, ezenzelwe ukuzenzela ikhadi lakho.
Thetha nathi okanye unxibelelane nenkxaso yabathengi ye-24/7 ukufumana iimpendulo ngesantya esiphezulu.
Ingaba le nkonzo yomthetho?
Ukwenziwa kwamakhadi e-ID kunye nenkonzo yokuprinta kusemthethweni kwaye siyaqhubeka nokugcina inkonzo enobulungisa, engafihlisiyo, ethembekileyo nethembekileyo kubathengi bethu ukusukela ngo-2007. Sivuleleke kwizimvo ezintsha, iingcebiso kunye nemibuzo, kodwa nceda ungaceli nayiphi na into enqatshelwe okanye enamalungelo obunini .
Ukuba unemibuzo eminye, funda yethu imimmiselo nemiqathango or Qhagamshelana nathi.
Ukhuselekile njani idatha yam?
Sisebenzisa kuphela idatha yakho ngeenjongo zethu zangaphakathi ukuphucula iinkonzo zethu. I-website yethu yonke, kubandakanywa umyalelo kunye nenkqubo yokuhlawula, i-SSL ikhuselekile kwaye kufuneka igcine idatha yakho ephephile.
Ulwazi lo kuziswa
Into engalunganga, ndiyenza ntoni?
Sithumelele i-imeyile nge nombolo ye-odityanisiweyo kwaye unamathisele umfanekiso wezinto ezingafanelekanga, nceda.
Zingaphi iindleko zokuthumela?
Ukuhanjiswa simahla kwaye okwangoku asibizi iindleko ezongezelelweyo zokuthumela nangaliphi na ilizwe.
Ingakanani ixesha lokuhambisa?
Sinikeza ngexabiso elingenamali kunye nokuhanjiswa kwehlabathi ngeposi. Imiyalelo iya kuthunyelwa emva kokufumana intlawulo kunye nexesha lokuhambisa elipheleleyo liyahluka:
a) IJamani i-1-2 yeentsuku zeentsuku
b) IYurophu i-3-5 yeentsuku zoshishino
c) International (USA, njl.) ii-7-14 zeentsuku zoshishino (ngenxa yamasiko)
Ngaba uhambisa kwiibhokisi ze-PO?
Ngokuqhelekileyo asikukhuthazi ukusebenzisa ibhokisi ye-PO kwaye asinakuqinisekisa ukuba kunokwenzeka, njengoko sithumela izinto zethu kwileta eqhelekileyo yeposi.
Ukwamkela iileta eziqhelekileyo kwiibhokisi ze-PO kungahluka ngokwamazwe.
Ukuba awunandlela yimbi, nceda ubuze iposi yakho ekufutshane, ukuba ungafumana ileta eqhelekileyo kwibhokisi yakho ye-PO.
Ndiyazi njani ukuba umyalelo wam uthunyelwe?
Nje ukuba sifumane intlawulo, i-odolo iya kulungiselelwa ukuhanjiswa. Siya kukwazisa ngokuzenzekelayo nge-imeyile, nje ukuba ithunyelwe ngaphandle.
Ukujonga imeko yethu yoku-odola ngesandla ungangena kwiakhawunti yakho kwaye ujonge iinkcukacha zeodolo yakho ukulandelela inqanaba lolwazi oluthe kratya.
Ndibuyisela njani umyalelo wam?
Ngokuqhelekileyo asinikeli nayiphi na inkonzo yokubuyisela, njengoko ikhadi ngalinye lenziwe kwaye alikwazi ukubuyisela kwakhona nakubani na.
Ukuba ufumene into engafanelekanga, unakho Qhagamshelana nathi nge-imeyile. Nceda ukhankanye inombolo yakho yeodolo ehambelanayo kwaye uncamathisele ifoto yento engeyiyo.
Yintoni iqabane lakho?
Sithumela zonke izinto zethu ngeposi yaseJamani. Bahlala beza kwimvulophu emhlophe engathathi hlangothi.
Iposi laseJamani liya kuyigqithisela ileta kwinkampani yeposi yelizwe ekuya kulo ilizwe, umz. I-USPS ye-USA, iRoyal Mail ye-UK, njl.
Ndingayifumana njani kwaye ndifumana nini idatha yam yokungena?
Ukufumana idatha yakho yokungena ngemvume kufuneka ubhalise kuqala okanye ubeke i-odolo yokuqala (akukho akhawunti yeendwendwe). Siza kukuthumelela isiqinisekiso nge-imeyile ngedatha yakho yokungena kwangoko.
Ndingayibona kuphi imbali yam yomyalelo?
Unokwazi ukubheka imbali yakho ye-oda kunye nazo zonke iinkcukacha Kwi-akhawunti yakho. Ngema ukujonga imiyalelo yakho.
Ukuba sele sele unayo i-akhawunti okanye sele sele umthengi, ngoko nceda sebenzisa ukuya kwinqanaba lokungena ngemvume kwaye qhubeka nokusebenzisa zethu iinkonzo.
Ndingenza njani iqabane?
Kukho iindlela ezininzi zokusebenzisana nathi:
Mema abahlobo bakho ukuba bathenge kwaye bafumane iikhomishini
Ukuba ngumashishini kunye nokudibanisa amabhanti ethu kwiwebhusayithi yakho!
Ukukhangela isisombululo esifanelekileyo?
Ukuba uyiBlogger, iYoutuber, i-Instagrammer (okanye enye) enabaphulaphuli abamele, sibhalele kwaye siya konwaba ngakumbi ukukunika impendulo kwangexesha.
Ziziphi iimpawu ezenziwe ngamakhadi e-ID?
Ikhadi leplastiki elungileyo, okanye bhetele: inkcazo ephakamileyo yePVC ikhadi kunye nokushicilelwa okungekho nto kunye neehologram kwixabiso lomgangatho.
Ngaba ukwenza iifowuni zamaphepha neehologram?
Amakhadi anyanisekileyo kufuneka abe nohlobo oluthile lwendlela yokhuseleko, enje ngeeholograms okanye iibhakhowudi ezinokukhangelwa. Amakhadi ethu e-MAKE e-ID abonelela ngeeholograms ezisemacaleni kunye ne-QR / iiBhakhowudi ezinokutshekishwa ukubonisa idatha yekhadi efakwe ngokukodwa kwizikena
Ubungakanani bokuba amakhadi e-ID yokwenza?
Zonke ii-ID ze-PVC ziza kwifom yebhanki / i-credit card size, kunye ne-8.5cm X 5.6cm ubude kunye nobukhulu obufanayo kuneemvume zokuqhuba okanye i-ID yombuso.